Fakkeenyonni dheertowwan%PRDUCTNAME armaan gadiiti.
Qaamolee UNO(muraawwan mosajiii rogeeffaman)
Deetaa qindaayinaa(ajajiawwan baafataaf)
Bu'uura kuusaa sagantaa % Y
Qaaqaa kuusaa sagantaa%Y
Faayiloota dheertoo(faayiloota*.oxtdheertowwan tokko yookiin isaa olakaakuuwwan tarreeffaman irratti qabata.
Fayyadamtoonni bulchaa waliin yookaan mirga hundee waliin qaaqa iddootti dheertoowwan "fayyadamtoota hundaaf" yookaan "anaaf qofa" ijaaruuf filatan argu. Fayyadamtoonni baratamoo mirgoota kana malee dheertoowwan fayyadama ofii isaaniitif ijaaruu, haqu, yookaan foyyeessuu ni danda'u.
Fayyadamaan hundee yookaan mirga bulchaa waliin dheertoo akka dheertoo yagutoo fayyadamtoota hundaaf jirutti ijaaruu danda'a. Erga dheertoo filatteen booda, qaaqni ni banama akkasumas fayyadamaa ammeef yookaan fayyadamtoota maraaf akka ijaartu adda baasi.
Fayyadamaan mirga hundee hin qabne fayyadama ofiitiif qofa dheertoo ijaaruu danda'a. Kun dheertoo fayyadamaa jedhama.
Dheertoon akka faayiliitti dheertoo faayilii .oxt tti jiraata.
Dheertoo fayyadamaa ijaaruuf
Kan armaan gadii keessa tokko hojjedhu.
Iyya'aa faayilii sirna kee keessatti faayilii .oxt lama cuqaasi.
Fuula saphaphuu irratti, geessituu faayilii *.oxt cuqaasi (yoo iyya'aan saphaphuu kee dheertoo bulchaa gosa faayilii kanaaf qindeessamuu danda'a).
Meeshaalee - Bulchaa Dheertoo cuqaassi fi Ida'i cuqaasi.
Dheertoo yagutoo haalata barruu keessatti ijaaruuf
Buufata ykn qola ajajaa bani.
Xurree fi maqaa faayilii dheertoo kee fayyadamuun, ajaja armaan gadii galchi.
Qaaqa faayilii bakka dheertoowwan ida'uu barbaaddu filuu dandeessutti bana. Dheertoowwan filataman garagalchuu fi galmeessuuf, Bani cuqaasi.
Dheertoo ijaarame fili, itti aansuudhaan dheertoodhaaf qaaqa Dirqaalee banuuf cuqaasi.
Title is: Taliiga Dheertoo